अब यस्तो कहिल्यै नहोस्ः बाबुराम आचार्य
Aba Yasto Kahilyai Nahos by Babu Ram Acharya
‘अब यस्तो कहिल्यै नोस्’ इतिहास सिरोमणी बाबुराम आचार्यका ऐतिहाँसिक लेखहरुको सँगालो हो । २०१५ सालको आसपासमा लेखिएका यी लेखहरुमा बहादुर शाह देखि देब शम्सेरका पालासम्मका विभिन्न षड्यन्त्रका घटनाहरुको बारेमा जानकारी पाइन्छ । विशेषगरी बहादुर शाहको हत्या, भिमसेन थापाको उदय र अवसान, जंगबहादुर कुँवर राणाको उदय र राणा शासनको प्रारम्भिक विकासक्रमका बारेमा एकदमै महत्वपूर्ण जानकारीहरु यसमा समेटिएका छन् । यस अघि पढेको जगदीश घिमिरेको सकसमा उल्लेख गरिएका धेरै घटनाहरुको सत्यताका बारेमा शंङ्का उत्पन्न भएको थियो । यो पुस्तक पढ्दा त्यसमा भएका धेरै कुराहरुको गैह्र आख्यानपूर्ण विवरण पाइन्छ । सायद जगदीश घिमिरे जिवितै छँदा उनको पुस्तकका बारेमा गहन छलफल भएर त्यसको श्रोत सामग्रीका बारेमा पनि केहि प्रकाशित भएको भए उनको पुस्तकको महत्व अझै बढ्ने थियो । सकस पढिसकेकालाई यो पुस्तक पढ्नुले अझै फाइदा पु¥याउँछ र यो पढिसकेकालाई सकस पढ्नुले अझै थप जानकारी हाँसिल गर्न मद्दत गर्छ ।
पुस्तकमा बहादुर शाहको हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाहको हत्याकाण्ड, भिमसेन थापाको उदय र अस्त, इतिहासका कुख्यात कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व र अलौपर्व, लगायत अन्य केहि कम सुनिएका राणाशाही विरुद्धको अठतीस सालको असफल षडयन्त्र जस्ता घटनाको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । भिमसेन थापाको बारेमा इतिहासले धेरै राम्राकुराहरु गाएको भएपनि उनले शक्ति हातपार्नका लागी गरेका हत्याहरुको विवरण इतिहासहरुमा पाइँदैन । त्यस्तै उनको मृत्युको हकमा पनि अनेक भनाइहरु पाइन्छ । यसमा पुरानो विष मुद्दालाई बल्झाएर पाँडेहरुले षडयन्त्रगरी आत्महत्या गर्न बाध्य तुल्याएको तर उनी ९ दिनसम्म तड्पिएर विष्णुमतिको किनारमा अन्तिम स्वास फेरेको भन्ने उल्लेख छ ।
“राजा श्री ५ राजेन्द्रविक्रम शाह तथा महारानी साम्राज्यलक्ष्मी देवीकै निर्देशनानुसार रगतले लथपथ भएको यिनको (भिमसेन थापाको) अद्र्धचेत शरीर त्यसै दिन विष्णुमती नदीको त्यसे बगरमा लगरेर लावारसि अवस्थामा फ्याँकियो जुन बगरमा तेत्तीस वर्षजति पहलिे चौतारा वदिुर शाही, चौतारा शेरबहादुर शाही(लयाइते तर्फका रणबहादुर शाहका दाजुहरु, शेरबहादुरले बहादुरशाहको हत्याका लागी रणबहादुर शाहलाई उक्साएका थिए र पछि रणबहादुरलाई सभामै तरबार प्रहार गरेर मारेका पनि थिए, जंगबहादुर कुँवर राणाका बाजे बालनरसिंहले शेरबहादुरलाई लगत्तै मारेका थिए ) तथा पाल्पा राज्यका राजा पृथ्वीपाल सेन लगायतका पैँचालीस जनाजति निरपराध व्यक्तिका लासहरु अमानुषिक रुपमा स्याल, कुकुर तथा गद्धिहरुलाई निर्दयतापूर्वक लुछाइएका (रणबहादुर शाहको हत्याको अभियोगमा विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा मारिएका भएपनि भिमसेन थापाले शक्ति हत्याउने नियतकासाथ सबै रचेको आरोप आचार्यले लाएका छन्) थिए ।
साउन महिनाको मध्य–वर्षादको झरी तथा हुरीमा भिज्दै जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेर घुर्र–घुर्र गर्दै स्याल, कुकुर र गद्धिहरुकै बीचमा ९ दिनसम्म जीवित रही अन्त्यमा ६४ वर्षको उमेरमा त्यसै बगरमा यिनले (भिमसेन थापाले) आफ्नो जीवनलीलालाई समाप्त गरे (वि.सं. १८९६, श्रावण १६) ।”
पुस्तकमा बाहिर प्रकाशमा आएका बाहेकका कुराहरुलाई बढि जोड दिइएको छ । त्यसैले भिमसेनथापाको नकारात्मक पक्षहरुमा बढि ध्यान पु¥याइएको पाइन्छ । जंगबाहदुर राणालाई पनि जंगबहादुर कुँवर राणा भनेर पछिसम्म उल्लेख गरिएको छ । राजेन्द्रलक्ष्मी भन्दा बढि बहादुर शाह प्रति सहानुभुति देखाइएको छ । सत्ता र शक्तिको लागी पाँडे, थापा, कुँवर राणा, शाही÷शाह, आदिको आपसी कलह र एकअर्कालाई सिध्याएर आफू बलियो हुने खेलहरुले नै बहादुर शाह पश्चातको कालखण्ड सकिएको छ । शाही र शाह राजपरिवारकै नातपातका छन् भने थापा भीमसेन थापाका सन्तती र कुँवर राणा वालनरसिंह कुँवरका सन्ततीहरु छन् भने पाँडेहरु कालु पाँडेका सन्तानहरु छन् । जंग बहादुर कुँवर राणा भिमसेन थापाका भतिजा माथवरसिंह थापाका भान्जा हुनाले थापा परिवारको शक्ति खोसेर कुँवर राणाले लिनु, वहादुर शाहलाई रणबहादुरले मार्न लाउनु, रणबहादुरलाई उनकै सौतेनी दाइ शेरबहादुर शाहीले मार्नु पछि गएर रणोद्दीपसिंह कुँवर राणालाई खड्गशम्सेर कुँवर राणाले मार्नु, आदिले प्राय पारिवारिक खिचातानी र हत्याहरुले इतिहासको पाना भरिएका छन् । एक पुस्ताले दुःखले आर्जेको राज्यमा पछिका पुस्ताले रजाईँ गर्ने र त्यसकै फलस्वरुप अर्काले खोस्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । प्रतापसिंह शाह बलियो भइदिएका भए र पिता जस्तै दूरदृष्टिवाला भएका भए उनले भाइ बहादुरशाहसँग मिली देशको सिमा बढाउने र गाभिएका राज्यभित्र भावनात्मक एकिकरण गराएर राज्य बलियो बनाउन तर्फ लाग्थे होला । त्यसो भएको भए इतिहासै बेग्लै हुने थियो । तर पृथ्वीनारायण शाहपछिका सिंहासनका उत्तराधीकारीहरु मोज मस्ती र अधिकारको लुछाचुँडिमै व्यस्त भए । त्यसैको फाइदा कहिले थापा त कहिले कुँवर राणाले उठाए । आफ्ना विरोधीहरुलाई दमन गरेरै भएपनि अलि लामो समयसम्म स्थिरता ल्याउनेमा भिमसेन थापा र जंगबहादुर कुँवर राणा नै देखिन्छन् ।
इतिहासको आधार राजाका नाममा लेखिएका अर्जीपत्रहरुलाई मानिएको छ । बाबुराम आचार्यका कुराहरु अन्य केहि पुस्तकसँग बाँझेका छन् । उदाहरणका लागी अलि रियाज र सुभो बासुको प्याराडाइज लस्ट स्टेत फेलर इन नेपाल पुस्तकमा नेपाल १७९२ मा चिनियाहरुबाट हारेपछि एकिकरण अभियान रोकिएको र १८१६ पश्चात लगभग अंग्रेजबाट संरक्षित राष्ट्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । आचार्यले भने कहिँ कतै यस्तो संकेत गरेका छैनन् । नेपाली शासकले अंग्रेज रिझाउने प्रयास गर्ने गरेको र बेलाबेला शक्तिमा आउन चाहने भारदारले समेत अंगे्रजको मनोदशा अनुसार कदम चाल्ने र दरबारले दूताबासमा शरण लिन जाने जस्ता कुराहरु त उल्लेख गरिएका छन् तर ठाडो हस्तक्षेपका कुराहरु उल्लेख छैनन् ।
केही गौरव गर्नु पर्ने कुराहरु पनि बाबुराम आचार्यले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । नौ हजारजछि चिनियाँ सैनिकहरुको नेतृत्व ग्रहण गर्दै सेनापति तुङ्थ्वाङ्ले केरुङ्तर्फको बाटोहुँदै विंसं १८४९को आषाढमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका सैनिकलाई लिस्ती नामक ठाउँमा नेपाली सेनाले वीरतापूर्वक रोकिदिएका थिए । बेत्राबती नदि पार गरेका तीनहजार चिनियाँ सैनिकको फौजलाई हराइ चिनीयाहरुलाई पछि हट्न बाध्य पारे पछि नेपाल र चिन बीच सन्धी सम्पन्न भएको थियो । बहादुर शाहले यी युद्धमा बढि खर्च गरेको भन्ने आरोप खेप्नु परेको कुरा पनि पुस्तकमा उल्लेख छ ।
एकिकरणका सबालमा पिताको जस्तै सोच राख्ने भएपनि रणबहादुरले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि बहादुर शाहले चिनियाँ अधिकारी गुहारेको प्रसंग विदेशी हस्तक्षेप बढाउनमा देशकै सासकहरु पहिले देखिनै तल्लीन थिए भन्ने देखिएको छ । जे होस् यो पुस्तकले नेपाली इतिहासको केहि दुःखद र पाठ सिक्नु पर्ने दिनहरु पाठक माझ ल्याएको छ । इतिहास र राजनीतिमा रुचि राख्नेका लागी यो एकदमै उत्तम पुस्तक हुन सक्छ । साथै यसालाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग गरेर पुरानो इतिहासको पुनर्लेखन गर्नेका निम्ती पनि यो पुस्तकले बलियो आधार दिन्छ ।
पुस्तकका कम्जोर पक्षमा मितिहरु नेपाली र अंग्रेजी लेख्ने क्रममा भएका गल्तीहरु दोश्रो संस्करणमा पनि सम्पूर्ण रुपले सच्चिएका छैनन् । इतिहास लेखनको आधार प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएका छैनन् । पुस्तकमा उल्लेख घटनाहरु कुनै आँखोदेखि बयान नभएकाले श्रोत सामग्रीको उल्लेखले विश्वस्नीयता थपिन्थ्यो र थप अध्ययन गर्न इक्षुकका निम्ति पनि बाटो खुल्थ्यो । बहादुर शाह देखि देबशम्शेर सम्मको इतिहास छेउ न टुप्पोको भएको जस्तो लाग्छ । पृथ्वी नारायण शाह देखि ००७ साल सम्मको भएको भए देश निर्माण देखि प्रजातन्त्र सम्मको इतिहास भन्न मिल्थ्यो । जे होस् ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ पढ्नै पर्ने पुस्तक मध्येको एक पुस्छक हो । मलाई लाग्छ ‘सकस’ पढेकाले झन् छुटाउनै हुँदैन ।
(अचेल पुस्तक पढ्नु भन्दा पढेपछिको प्रतिकृया लेख्नमा बढि समय जाने गरेको छ । अघिल्लो दिन पनि यही प्रतिकृया लेखन कार्य पुरा र्गनका लागी विहान ७ बजेसम्म ब्युँझिएको थिए । नेपालको इतिहासका धेरै कुराहरु नेपाली विकिपिडियामा समेत संग्रहित भएको पाउँदा ज्यादै खुशी महशुस भएको थियो । त्यसका अलाबा सूदूरपश्चिम नेपालका सन्दर्भमा पनि थुप्रै जानकारीहरु पाउँदा आँखा चिम्लन मनै लागेन । यसपटक पनि विहानको ३ बज्नै लागेको छ । अबलाई भने यो लेखाई यहिं नै बिट मारौँ होला ।)
Aba Yasto Kahile Nahos Baburam Acharya Book-review History Nepal
पहेँलो गुलाफ: प्रेमा शाह
प्रेमा शाह मनपर्ने अभिनेत्री जल शाहकी आमा भनेर उनको लेखन प्रति निकै अघि देखि रूचि थियो । त्यो भनेको १६-१७ वर्ष अघि आठ-नौ कक्षामा पढ्दा भनेको हो । फेरी उनी पनि विपी जस्तै यौन मनोविज्ञानमा कलम चलाउने भन्ने विवरण साहित्यकार परिचयार्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छापेको एक पुस्तकमा भेटेको थिएॅ । त्यसले झन् उनको साहित्य प्रतिको रूचि झन् बढाएको थियो । उनको कृति भने पढ्न पाएको थिएन । पछि नगरकोटीको अक्षरगंजमा पहेंलो गुलाफ को चर्चा पढेपछि सो पुस्तक पढ्ने लालसा फेरि बौरिएको थियो ।
पहेंलो गुलाफ(२०२३), विषयान्तर(२०२८) र मम्मी(२०४०) गरेर शाहका तीन कृतिलाई एकमा गाभेर रत्न पुस्तकले निकालेको रहेछ । शिव नेपालबाट आउने खबर पाउने बित्तिकै अनुराधा र पहेंलो गुलाफको ईक्षा सुनाएॅ । उनले पहेॅलो गुलाफ पाएछन् । त्यसरी पहेंलो गुलाफ हात पर्यो ।
मने एक्कासी उठ्याे । हातकाे पेटीले उसले पातलीलार्इ सटासट हिर्काउन थाल्याे । पातली रन्थनिर्इ, उसकाे अहङ्कार पेटीकाे चुटार्इसित दुख्ने भएर अायाे । उसले अगाडिकाे बाँसकाे ढुङ्ग्राे उठाएर मनेलार्इ हिर्कार्इ । मने झन् जङ्गिएर पातलीलार्इ जता पायाे उतै पेटीले हिर्काउन लाग्याे । पातलीले म…
योगमायाः द वाइल्ड वाइल्ड इस्ट
योगमायाका बारेमा मैले पहिलो पटक पढ्न पाएको भनेको करीव १६ महिना अघि कुमार नगरकोटीको फोसिलमा हो । फोसिल मैले पढेको नगरकोटीको पहिलो पुस्तक भएकोले योगमाया काल्पिनिक पात्र हुन् या वास्तविक भन्ने नै थाहा थिएन । त्यसको लगत्तै योगमायाका विषयमा अन्य चर्चाहरु पनि हुन थाले । करीब १ वर्ष अघि पढेको नयनराज पाण्डेको घामकिरीमा पनि योगमायाको चर्चा थियो । तिनै फुटकर प्रसंगहरुले नै यो पुस्तकसम्म तानेको थियो ।
यो पुस्तक योगमायाका बारेमा अध्ययन गर्ने पहिलो विदेशी वौद्धिक तथा Heir toaSilent Song: Two Rebel Women of Nepalकिताब लेख्ने बार्बरा निम्री अजिज र पारिजातको प्रसंगसँगै सुरु भएको छ । पारिजातले निम्रीलाई योगवाणी उल्था गर्नमा सहयोग गर्ने सहमती जनाएबाट पुस्तकको ‘आरम्भ’ भाग सकिएको छ । तयसपछि सुरु भएको ‘ठूलीहजुर’ भागमा योगमायाका बारेमा सम्पूर्ण कथा समेटिएको छ ।
कक्षा १० को अनिवार्य अंग्रेजीको पाठ्यक्रममा समावेश भइसकेको भएपनि (?!) यो पुस्तक प्रकाशनपूर्व योगमायाका बारेमा आंशिक रुपमा मात्रै अध्ययन भएको र विभिन्न खाले मतहरु प्रकाशमा आएका थिए । यो पुस्तकले निकै अनुसन्धान र स्थलगत भ्रमणहरु पश्चात योगमायाको फर…
डा. रामेसको चल्स साेभराज उर्फ ‘विकिनी किलर’
डा. रामेश नेपाली ट्वीटर जगतमा खुब चिनिएको नाम हो । यसो भन्दा उनलको ट्वीटर वाहेक अन्त पहिचान छैन भन्न खोजेको हैन । बरु ट्वीटरमा उनी विशेष सकृय छन् भन्न खोजेको भने अवश्यै हो । केहि साता अघि देखि ट्वीटरमा उनले लेखेको नयाँ पुस्तकको व्यापक चर्चा सुरु भयो । सुरुवाती चरणमा प्रकाशित प्रतिकृया एकदमै राम्रा थिए । तर पुस्तक नेपाली बजारमा उपलब्द्ध थिएन । त्यसैले ट्वीटरमा ‘किताब खै’ भन्ने प्रश्न खुब चर्चित भएको थियो । भाग्यवश नेपाल बाहिर बासेका पाठकका लागी एमजनबाट किण्डल प्रति किन्न सहज रैछ । पुस्तक नै किन्दा पुस्तक भन्दा दोब्बर हुलाक शुल्क पर्न जाने हुनाले किन्डल प्रतिमै रमाएँ । किण्डल प्रति उपलब्द्ध भएकैले नेपाली बजारमा सुलभ रुपमा उपलब्द्ध नहुँदै नेपाली लेखकको पुस्तक पहिलो पटक हात लाग्यो ।
सन् २०१५ मा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले हरेक दुई हप्तामा एक नयाँ किताब पढ्ने भनेर आफ्नालागी आफैले एउटा ‘पढ्ने चुनौती’ दिएका थिए । त्यो यति व्यापक भयो कि त्यसमा धेरै अन्य पनि सहभागी भए । म पनि केहि वर्ष देखि त्यसैको सिको गरिरहेको थिएँ । सन् २०१८ मा ४० किताब पढि सक्ने लक्ष राखेको भए पनि ६ महिनामै सो लक्ष…
Random's favorite books »
Share book reviews and ratings with Random, and even joinabook club on Goodreads.
सिमाङ्कन विवादका ४ कारणहरू र हालै दर्ता भएकाे संसा...
‘एब्स्ट्रयाक्ट चिन्तन प्याज’
Adhyaroma Chhauchhau timi
Bachne Euta Jindagi
Don't Kill Osho !
Jungabahadurko Belayeti Kapi
Keshav Raj Pidali
Ma Aanand Sheela
Mirja Dilsad Beg
Understanding Third Gender
चिना हराएकाे मान्छे
जंगबहादुरको बेलायती कापी
निलम कार्कि निहारिका
नेपालकाे महाभूकम्प १९९०
बाँच्ने एउटा जिन्दगी
मान्ठा डराएकाे जुग
किरातको इतिहास र संस्कृतिः इमानसिं चेमजोङ्ग
सन् २०१७ मा पढेको पहिलो पुस्तकमा उपेन्द्र सुब्बाको ‘लाटो पहाड’ पर्न गयो । ‘लाटो पहाड’ले बाठो तरिकाले जातीय मुद्दा पनि उठाएको बुझ्दा किरातीहरुका बारेमा बढि जान्ने इक्षा लाग्ये । सामान्यतः अहिले सबै भन्दा बढि शोषित र पिडित भनेर मधेसीहरुले आवाज उठाइ रहेका बेलामा आक्कल झुक्कल सुनिने जनजातीका आवाजहरुले त्यति प्राथमिकता पाउँदैनन् । मधेसीले आफ्ना नाममा प्रदेशै पाइसकेको अवस्थामा पनि किरातीहरु÷जनजातीहरु अझै पनि सिमान्तकृत भएको र उनीहरुमाथि भएको सांस्कृतिक आक्रमण, जबरजस्ती लादिएको ‘बाहुन कुरा’ (मलाई त्यति चित्त नबुझेको भएपनि पुस्तकको शब्द सापटि लिएँ)का कारण शिक्षा लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा पछाडि परेको विषयमा लेखिएका कथाहरुले एकछिन सोच्न बाध्य बनायो । यी कथाहरु पढ्दै गर्दा कताकता आफूमाथि त्यो अन्याय गरेको भनेर चोर आउँला सोझिएको पाएपछि मन अलि अस्थिर भयो । कथाको परिवेशकाबारेमा गहिरिएर बुझ्न मन लाग्यो । सो क्रममा उपेन्द्र सुब्बाका पाए जतिका अन्तर्वार्ता सुन्ने देखि लिएका कितावमाथि चलाइएका छलफलहरु सबै सुनेँ । त्यसै क्रममा संयोगले इमानसिंह चेमजोङले लेखेको किरातको संस्कृति तथा इतिहास (History and C…
सेतो धर्ती–अमर न्युपाने
सेतो धरती by Amar Nyaupane
सेतो धर्ती अमर न्यौपानेको एक उत्कृष्ट कृति भनेर चिनिन्छ । न्यौपानेले एकल महिलाको गर्भ देखि मृत्यु प्रतिक्षाको घडिसम्मको कथानकलाई उपन्यासको रुप दिएका छन् । देवघाटमा आफूले भेटेकी एक वृद्धासँगको सामान्य कुराकानीका क्रममा उनको मनमा यो उपन्यासको जन्भ भएको छ । ती वृद्धाका जीवनका महत्वपूर्ण घटनालाई उपन्यासकी ‘म’ पात्र ताराको जीवनको साँचो बनाएर बाँकी कथा र उपकथाहरु बनाइएको छ । देवघाटमा बसेर ३० दिनको अनुसन्धान पछि उपन्यासले यो रुप पाएको छ ।
उपन्यास पढ्दा एउटा जीवन पढियोः दुःख, निराशा र कुण्ठाले भरिएको जीवन । विहेको नाममा केटाकेटीको खेल भन्दा बढ्ता केही नजानेकी ताराको सात वर्षको वाल्यावस्थामा झुक्याएर विहे गरिइन्छ । नौ वर्षमा पति वितेपछि उनको जीवनको रंग खोसिन्छ । उनलाई पतिको अनुहार समेत सम्झना हुँदैन तर लुगा, गहना र कपालको मायाले बढि भकानिन्छिन् । उनको यो भोगाइबाट बचाउन उनका आमाबाले पनि केहि गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि विस्तारै किशोरावस्था आउँछ, बैंस आउँछ, प्रौढावस्था आउँछ र वृद्ध भएर मृत्यु पर्खने अवस्था सम्म उनी पुग्छिन् । त्यसक्रममा उपन्यासमा अ…
अन्तर्घातिलाई कारवाही कि दोस सार्ने बाटो ?
अहिले कैलालीमा कांग्रेसका अन्तर्घातीलाई कारवाही गर्ने लहड चलेको छ । चुनावका बेला पुराना अन्तर्घातीलाई ‘सात खुन माफ’ गरेर चुनावमा लाग्न आह्वान गर्ने देउवा समक्ष उनकी पत्नीको उमेद्वारी प्रति असन्तुष्ट रहेका पुष्करनाथ ओझा लगायतका पार्टी कार्यकर्ताको सूची नै तयार पारेर बुझाइएको छ । कैलालीमा आर्जु देउवा हार्नुको पछाडि पार्टिकै अन्तर्घात भनेर धेरैले अथ्र्याएका थिए । हुन त यो राजनीतिक दलहरुमा चलिआएको चलन नै हो । जित्नेले जनताले भोट दिए र विश्वास गरे भन्ने अनि हार्नेले अन्तर्घातले हारे भनेर भन्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । अन्तर्घातको आरोप लगाउने क्रममा खास गरी डोटी क्षेत्रको भोट आर्जुको लागी नआएको र त्यसो हुनुमा निवर्तमान सांसद ओझा कारक रहेको भनेर अनलाईन खबरले समाचार समेत लेखेको थियो । नभन्दै अहिले आएको सूचीमा ओझाको नाम पहिलो नम्बरमा राखिनुले ती खबरहरुमा केहि हद सम्म सत्यता भएको तर्फ संकेत गर्दछ ।
आर्जू राणाको उमेद्वारी नै पहिले त विवादास्पद बनेको थियो । उनी स्थानीय नहुनुलाई सबैले विरोधको प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । सुदूरपश्चिमको प्रतिनीधित्व पनि सुदूरका स्थानीयले नै पाउनु भन्ने तर्क आफैमा सुद…